Mpiady Amin’ny Fiovan’ny Toetr’Andro Ao Amin’ny Firenena Nosy Kiribati · Global Voices teny Malagasy
Mpiady Amin'ny Fiovan'ny Toetr'Andro Ao Amin'ny Firenena Nosy Kiribati
Voadika ny 25 Mey 2014 4:27 GMT
Zazavavy iray any Temwaiku mipetraka eo ambonin'ny sisa amin'ny fefiloha izay naorina hiarovana ny tanànany amin'ny fiakaran'ny ranomasina. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Nosoratan'i Fenton Lutunatabua ho an'ny 350.org tamin'ny volana Martsa ity lahatsoratra ity ary navoaka tamin'ny Global Voices noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty. .
Tsy zava-miafina ny hoe ny faritr'i Pasifika no ery am-bavahady raha resaka fiovaovan'ny toetr'andro. Any amin'ny toerana toa an'i Kiribati, dia miharihary amin'ny fomba samy hafa ny fiantraikany mivantana amin'ny tontolo iainana sy ny fiainan'ny olona andavan'andro. Manerana an'i Pasifika, mampitombo ny hamafin'ny zava-miseho efa ratsin'ny toetr'andro ny fiovaovan'ny toetr'andro, mampiakatra ny haavon'ny ranomasina, mampitombo ny haintany. Raha tsy mbola ampy hampivarahontsana izany, raha mbola manohy mandoro ireo solika avy amin'ny zavatra lò izao tontolo izao tahaka izay kasainy atao amin'izao fotoana izao, vao fiandohana fotsiny izao ho an'i Kiribati, ary mety hiharatsy aza.
Nandeha tany Kiribati aho tamin'ny volana lasa mba hanampy amin'ny fanamorana ny Fiofanan'ireo mpiady amin'ny fiovan'ny toetr'andro ho an'ny tanora ao amin'ny nosy Tarawa. Nandritra ny fotoana naha-mpikatroka mafàna fo ahy tamin'ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetr'andro, dia efa noraisina ho ohatry ny nosy amin'ny faritra ambanin'i Pasifika iharan'ny fiovaovan'ny toetr'andro foana i Kiribati.
Tao amin'ny Global Power Shift, fiaraha-miasa iray hanofanana ireo mpitarika ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro tany Istambul, dia nifanena taminà tanora lahy iray antsoina hoe Toani Bensonaho, izay nilaza tamin-kafanam-po ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro any aminy. Nanamafy ny finoako izany fa tsy isalasalàna ny tsy maintsy hanaovana ny ezaka ankapobeny ataon'izao tontolo izao hampihenana ny fandefasana entona manimba ny sosonà ozona ho eo amin'ny fetra farany 350 isaky ny iray tapitrisa (ppm).
Fefiloha any amin'ny tanàna amorontsirak'i Temwaiku; tanàna iray amin'ireo mora tondraka indrindra any Tarawa. Rava miandalana, nazeran'ny onja masiaka ny fefiloha manodidina ny tanàna izay natao hiarovana azy amin'ny fiakaran'ny ranomasina. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Mijoro ny Andiany Mpiady amin'ny Fiovaovan'ny toetr'andro ho an'i Pasifika.
Manohitra ny fitrandrahana solika azo avy amin'ny zavatra lò ny 350.org amin'ny ankapobeny ary dia fotoana mety ho an'ny 350 Pasifika ihany koa izao hiarahana amin'io ady io. Raha hipetra-potsiny isika ka avelantsika hanohy ny hetahetany amin'ny lafiny ara-toe-karena ireo indostria mpitrandraka solika azo avy amin'ny zavatra lò, dia fotoana izao hanaovantsika veloma ireo nosy mahafinaritra eto amin'ny ranomasim-be Pasifika sy ireo mponina ary ireo kolontsaina sy ireo fomba amam-pahalalàna nentim-paharazana.
Miankina amin'ny fomba fanorenantsika sy ny fitantanantsika ny herin'ny vahoaka eny ifotony ananantsika ny ampahany betsaka amin'ny famolavolàna io ady atao amin'ny indostria lehibe mpitrandraka solika azo avy amin'ny zavatra lò io, amin'ny maha-mponin'ny nosy Pasifika sy firenena antsika.
Mijoro ny andian'ny mpiady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ho an'i Pasifika ary miorina amin'ny fahadiovantsika, ny fahamarinana , ny hery ary ny faniriantsika hahavita zavatra.
Ilaintsika ny miaina ny rivotry ny fanavaozana sy ny famoronana ataon'ireo tanora mpiady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro, ary mametraka tsindrm-peo – tsy ho toy ny taloha- amin'ny firaisan'ny faritra misy antsika.
Manome tombony ho antsika hanehoana amin'izao tontolo izao fa ady mifototra amin'ny fiaraha-miasan'ny faritra sy ny fitiavana madio ny nosintsika ity fotoana ity. Tsy miady irery isika fa betsaka ireo miaraka amintsika ary mahery isika rehefa miaraka.
Tonga amin'ny fotoana manan-danja eo amin'ny tantarantsika isika izay ananantsika fotoana hamporisihana ireo mpiadin'ny angovo aty amin'ny nosy 14 aty Pasifika mba hamorona fotoana matanjaka izay hanako hatrany amin'ny taranaka faramandimby, amin'ny fanambarana fa :” Tsy rendrika izahay. Miady izahay”.
Hampiroborobointsika ny fahaiza-manaon'ireo tanora manerana ny faritra mba hahafahany mamaly io antso io sy hitondra lavidavitra kokoa ny tolontsika amin'ny fiatrehana ny indostria solika azo avy amin'ny zavatra lò.
Tsy mikasika fampahatsiarovantena ihany ity fanentanana ity fa ezaka amin'ny fanamafisana ny faharetan'ny tanora amin'ny fampahafantarana azy ireo ny marina momba ny toetr'andro sy ankafizany ny votoatin'ny hetsika erantany ho an'ny ady atao momba ny toetr'andro. Omentsika ireo tanora mpitarika ireo ny vintana hahazo tombotsoa amin'ny ho avy izay mendrika azy ara-dalàna. Omentsika hery izy ireo handray anjara amin'ny famahana olana sy hanjary mpiasa mahomby amin'ny fiovàna ao anatin'ny fiaraha-monina misy azy.
Izao no tantarain'i Pelenise Alofa, mpikambana efa ela ao amin'ny 350 Kiribati :
Manam-bintana ity andianà tanora ity. Manana ireo fitaovana sy ny fomba handresena ny tsy fahalalàna. Tsy zavatra itakiana fanànana vola no nampianarinay azy ireo. Ny fahalalàna nentim-paharazana ary ny fomba fampivadiana ny fahatakarany ny kolontsaina amin'ny fikatrohana moderina ankehitriny mba hampanjary ny fiovàna takiana. Azo omena tosika ry zareo mba ahafahany manosika ny hafa avy eo. Manana fanantenana hisian'ny ho avy ho an'i Kiribati aho, tsy hoe fotsiny hisy vahoaka, fa miaina – mifanaraka amin'ny hevitra rehetra fonosin'ilay teny.